Sidee ayaa loo kala hoggaaminayaa tartanka kabta dahabka ah ee gool-dhalinta Euro 2020?… (Yaase caawin sameeyey?) – Gool FM
(Yurub) 18 Juun 2021. Tartanka loogu jiro koobka qarammada Yurub ayaa meel wanaagsan maraya iyadoo xulalka qaarkood ay iska xaadiriyeen wareegga bugbaxa ee 16-ka Euro 2020.
Haddaba sidaas oo kale waxaa halkiisa ka socda tartanka ay xiddiguhu ugu jiraan kabta dahabka ah ee gooldhalinya Euro 2020.
Romelu Lukaku iyo Cristiano Ronaldo oo ahaa xiddigihii ugu goolasha badnaa horyaalka Talyaaniga ee Serie A ayaa hoggaanka gooldhalinta Euro wada haya haatan, waxaana ay saxiixeen min labo gool.
Lukaku ayaa labaaleey dhaliyey kulankii ay 3-0 uga adkaadeen Russia, halka Cristiano Ronaldo uu isaguna labo goo loo mid rikoore ahaa ku tuurtay.
Xiddigaha kale ee min labada gool dhaliyey waa ay badan yihiin ilaa iyo haatan waxayna kala yihiin Patrik Schick oo ka tirsan xulka qaranka Czech Republic oo labo gool ugu shubay Scotland, Manuel Locatelli oo isaguna labo gool u dhaliyey Talyaaniga kulankii Switzerland iyo Ciro Immobile oo isaguna talyaaniga labo gool u dhaliyey.
Waxaa sidoo kale ciyaartoyda kale ee labada gool leh illaa iyo haatan tartanka Euro 2020 ku jira Andriy Yarmolenko iyo Roman Yaremchuk oo ka wada tirsan xulka Ukraine iyo Denzel Dumfries oo isaguna labo gool u dhaliyey xulka Holland.
Dhinaca kale weeraryahanka xulka England ee Harry Kane oo ku guuleystay kabta dahabka ah ee Koobkii Adduunka 2018 kaddib markii uu ka dhaliyey lix gool, isla markaana la saadaalinayey inuu ku guuleysan doono kabta dahabka ah ee gooldhaliya Euro 2020 ayaan weli shabaqa soo taabay, waxaana kulankii ay ka adkaadeen Croatia goolka qura u dhaliyey xulka saddexda libaax Raheem Sterling.
Haddaba halkaan hoose ka eeg xiddigaha goolasha ugu badan ka dhaliyey illaa iyo haatan tartanka Euro 2020, xulalka ay ka tirsan yihiin, tirada goolasha ay dhaliyeen iyo kuwa ay caawiyeen:-
Roman Yaremchuk – Xulka Ukraine 2 gool iyo 1 caawin.
Andriy Yarmolenko – Xulka Ukraine 2 gool iyo 1 caawin
Ciro Immobile – Xulka Italy 2 gool iyo 1 caawin
Patrik Schick – Xulka Czech Republic 2 gool iyo wax caawin ma sameynin
Cristiano Ronaldo – Xulka Portugal 2 gool iyo wax caawin ma sameynin
Manuel Locatelli – Xulka Italy 2 gool iyo wax caawin ma sameynin
Denzel Dumfries – Xulka Netherlands 2 gool iyo wax caawin ma sameynin
Romelu Lukaku – Xulka Belgium 2 gool iyo wax caawin ma sameynin